Xiaomi Mi 8: အင်္ဂါရပ်များ၊ ဗားရှင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Gadget သတင်း
Xiaomi Mi 8: အင်္ဂါရပ်များ၊ ဗားရှင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Ruben gallardo | | မိုဘိုင်း
Xiaomi Mi 8 သည်လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်စမတ်ဖုန်းကဏ္sectorတွင်ရှိသောစွယ်စုံရှိသောတရုတ်ကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်ကောင်းသောလောင်းကြေးဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ဒီမိသားစုသစ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းသုံးခုပါဝင်သည်: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE နှင့် Xiaomi Mi 8 Edition Explorer။ အဆုံးစွန်သည်ယနေ့အထိကုမ္ပဏီ၏အင်အားအကြီးဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းအားအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်ရုံသာမကအထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ကောင်းသောလုံးဝပွင့်လင်းမြင်သာသောဒီဇိုင်းဖြင့်လည်းထင်ရှားသည်။
Xiaomi သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဆိပ်ကမ်းများအများဆုံးရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး / စျေးနှုန်းအချိုးအစားကမ်းလှမ်းအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူကပြသထားတယ်။ Xiaomi Mi 8 သည်ချွင်းချက်မရှိသည့်အပြင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသည်။ Samsung, Apple, LG တို့လိုအရေးကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေဆီကနေမင်းနဲ့စကားပြောနိုင်ခြင်း။ အဆုံးစွန်သောများအတွက်စျေးကွက်အတွက်ကောင်းသောအချိန်ရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့် စမတ်ဖုန်းများ။ သို့သော်ဤပြissueနာကိုဘေးဖယ်ထားလျှင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Xiaomi ၏အလောင်းအစားအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ကျပါသည်။
2 Xiaomi Mi 8: မူရင်း
3 Xiaomi Mi 8 SE: အိတ်ကပ်အားလုံးသို့ရောက်ရှိလိုသောမော်ဒယ်
4 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ထိပ်ဆုံးရှိ
Xiaomi က Mi 8
Xiaomi က Mi 8 အရှေ့တောင်
Xiaomi က Mi 8 Explorer ကို Edition ကို
ဖန်သားပြင် ၆.၁၈ လက်မ Full HD + ဖြစ်သည် ၆.၁၈ လက်မ Full HD + ဖြစ်သည် ၆.၂၂ လက်မ Full HD + နှင့်လက်ဗွေဖတ်စနစ်ပါရှိသည်
Processor ကို Snapdragon 845 Snapdragon 720 Snapdragon 845
ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ် Adreno 630 Adreno 616 Adreno 630
RAM ကို6GB ကို4/6GB အထိ 8 GB ကို
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 64 / 128 / 256 GB အထိ 64 GB ကို 128 GB ကို
အဓိကဓါတ်ပုံကင်မရာ 12 + 12 MPx 12 +5MPx 12 + 12 MPx
ရှေ့ကင်မရာ ၂ MPx ၂ MPx ၂ MPx
operating system ကို Android 8.1 Oreo + MIUI 10 သုံးထားပါတယ်။ Android 8.1 Oreo + MIUI 10 သုံးထားပါတယ်။ Android 8.1 Oreo + MIUI 10 သုံးထားပါတယ်။
ဘက်ထရီ ၃,၃၀၀ mAh + အမြန်အားသွင်းခြင်း + ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း 3.120 mAh + အစာရှောင်ခြင်းတာဝန်ခံ ၃,၃၀၀ mAh + အမြန်အားသွင်းခြင်း + ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း
ဆက်သွယ်မှု 4G / DualSIM / dual GPS / NFC / Bluetooth 5.0 / USB-C 4G / DualSIM / GPS / NFC / Bluetooth 5.0 / USB-C 4G / DualSIM / dual GPS / NFC / Bluetooth 5.0 / USB-C
Xiaomi Mi 8: မူရင်း
၎င်းသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးကို၎င်း၏အမည်ပေးသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ ဤမူရင်းမော်ဒယ်သည်၎င်းတို့အားလုံး၏ဟန်ချက်ညီဆုံးသောပုံစံဖြစ်သည်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်တစ် ဦး ရပါလိမ့်မယ် ၁.၄ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခု 18: 7:9format နဲ့ 2.5D ကွေးဖန်နှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ဘောင်များကိုအမြင့်ဆုံးသို့လျှော့ချပြီးစုစုပေါင်း ၈၆.၆၈% ၏ထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင်ကိုရရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းရွေးချယ်ထားသည့် resolution သည် Full HD + ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကိန်းဂဏန်းများအရ 86,68 x 1.080 pixels ဖြစ်သည်။
အလားတူပဲ၊ သူတို့ကအောက်ပါဖက်ရှင်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘဲမျက်နှာပြင်အထက်ဖက်မှာလည်းလူသိများတဲ့လူဟောင်းလူကြိုက်များတဲ့ Notch ရှိသည်။ terminal ကိုပိုမိုလုံခြုံစွာမြန်ဆန်စွာသော့ဖွင့်နိုင်စေရန်မတူညီသောအာရုံခံကိရိယာများ (12 + 12 megapixels) နှင့် 20 megapixel resolution ကင်မရာတို့ဖြင့်မျက်နှာမှတ်မိထားသောသိုလှောင်ထားရှိပါသည်။ သူတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုဗတ္တိဇံပေးခဲ့သလဲ။ အမှန်စင်စစ် Face ID ။ နှင့်သင်တန်း၏ကြောင်းအတည်ပြုသည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Animojis ရပါလိမ့်မယ်.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အတွင်း၌သူတို့သည်အာဏာကိုချွေတာနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထို့အပြင်ယခုနှစ် ၂၀၁၈ ၏အမြင့်တွင် Xiaomi Mi 2018 သည် Qualcomm ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ 845-core Snadragon 8 2,8 GHz အကြိမ်ရေမှာ operating ဖြစ်စဉ်ကို။ ထပ်မံ၍ Adreno 630 ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်ကိုထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ကာ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်များများလိုအပ်သည့်အခါ terminal ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီ CPU ကိုလိုက်ပါသွားပါလိမ့်မယ်6GB RAM နှင့် internal space ကို 64, 128 သို့မဟုတ် 256 GB ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခုတစ်ခုခုဖြစ်လျှင်သင်၏အသင်းများတွင်ထည့်သွင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ The Xiaomi Mi 8 တွင် dual sensor ရှိသည် နောက်ကျောတွင်ဓာတ်ပုံများမှုန်ဝါးနှင့်ကစားရန်။ အလားတူပင် Xiaomi သည်ဤပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အတုထောက်လှမ်းရေးများကိုလည်းလောင်းနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးသောလျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်ကိုအမျိုးမျိုးသော algorithms များမှတစ်ဆင့်လောင်းနိုင်သည်။ ဤတွင်ကဏ္ the ရှိအခြားကင်မရာများ၏ရှေ့တွင်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ချန်ထားခဲ့သည့်နမူနာအချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီဟာကပိုပါတယ် DxOMark တွင်ရရှိသောရမှတ်သည်ရမှတ် ၁၀၅ မှတ်ဖြစ်သည် "iPhone X က ၁၀၁ မှတ်ရတယ်။ "
ဒါ့အပြင်ဒီဗားရှင်းနှင့်အတူပါသည့်ဘက်ထရီသည် 3.300 milliamp စွမ်းရည်။ သတိထားပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းနိုင်ခြင်းနှင့်များပြားလှတဲ့ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှစ်ခုလုံးနဲ့သဟဇာတဖြစ်လို့ပါ။ Android version အတွက် Xiaomi သည်ကိုယ်ပိုင် MIUI ဟုခေါ်သည့်ကိုယ်ပိုင်အလွှာကိုအသုံးပြုသည်ကိုသင်ကောင်းစွာသိလိမ့်မည်။ ဒီနှစ်မှာလာ Android 10 Oreo ကိုအခြေခံထားတဲ့ MIUI 8.1 ဗားရှင်း - ပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်ဤအဖွဲ့မှသင့်အားစောင့်ကြိုနေသောအရာအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည်။ နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးအသင်းနှင့်တစ်နှစ်၏ကြယ်တစ် ဦး ဖြစ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်မိမိကိုရည်ညွှန်းသောအရာကို၌တည်၏ ကို virtual လက်ထောက် Xiaomi AI.
Xiaomi Mi 8 SE: အိတ်ကပ်အားလုံးသို့ရောက်ရှိလိုသောမော်ဒယ်
အလယ်ပိုင်းမှာကျွှန်တော်တို့မော်ဒယ်လ်ကိုရမယ် Xiaomi က Mi 8 အရှေ့တောင်။ ဤအဖွဲ့သည်၎င်း၏အစ်ကိုထက် ပို၍ တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်နောက်မှကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်အတိုင်းလည်းမှန်သည်၊ သို့သော်ဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက်စျေးနှုန်းသည် ပို၍ စျေးနှုန်းချိုသာလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာအသစ်မဟုတ်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အက်ပဲလ်၏ iPhone နှင့် SE ဗားရှင်းနှင့်အတူတူပင်မှတ်မိရန်ရောက်လာသည်။
Xiaomi Mi 8 SE အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။ ၅.၈၈ လက်မထောင့်ချိုး AMOLED မျက်နှာပြင်နှင့် Full HD + resolution ကိုခံစားနိုင်သည် (1.080 x 2.248 pixels) ဤအတောအတွင်းဤအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၎င်း၏ဈေးနှုန်းလည်းမဟုတ်တော့ဘဲစျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အတွက် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုကဏ္ high ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ချစ်ပ်အကြောင်းပါ Snapdragon 710 Adreno 616 နှင့်အတူ၎င်း၏အစ်ကို၏ကိန်းဂဏန်းများကိုအောင်မြင်ရန်မျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်သူအစားထိုးထားသော Snapdragon 660 ထက်မော်ဒယ်လ်ထက် ပို၍ အရည်ပျော်လွယ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဤ Xiaomi Mi 8 SE တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်4or6GB - RAM နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုတည်းသောသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာ 64 GB ကို module တစ်ခုဖြတ်သန်းသွားနေစဉ်။ ကျောဘက်မှာ dual-sensor ကင်မရာ (12 +5megapixels) လည်းရှိပြီးသူကတုန့်ပြန်မှုအတုကိုပြသမှာပါ။ ယခုဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ရှေ့အပိုင်းကို Notch နှင့် 20 megapixel sensor တို့ဖြင့်မောင်းနှင်မည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Xiaomi Mi 8 SE ကိုအခြေခံသည် Android 8.1 Oreo နှင့် MIUI 10၎င်း၏ဘက်ထရီသည် 3.120 milliamps သို့ရောက်ရှိပြီးအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းမရှိတော့ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Bluetooth 5.0 Technology, NFC နဲ့ USB type C port တွေရပါလိမ့်မယ်။
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ထိပ်ဆုံးရှိ
ပြီးတော့ငါတို့ကိတ်မုန့်ပေါ်ကိုလေအေးလာတာ။ Xiaomi က Mi 8 Explorer ကို Edition ကို။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ရှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဗားရှင်းဖြင့်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသည့်နောက်ဘက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်နည်းပညာချစ်သူများသည်ကလေးများအဖြစ်ပျော်မွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုသင်အစအ ဦး ၌အသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သောမူရင်းဗားရှင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အခုတော့aကိုကမ်းလှမ်းကဲ့သို့အပြောင်းအလဲတချို့ရှိလိမ့်မည် 8 GB RAM နှင့် 128 GB သိုလှောင်ရန်နေရာ။ ဒီ Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုဒီ configuration နဲ့ပဲရောင်းမှာပါ။
သို့သော်ဤနေရာတွင်ဤမော်ဒယ်လ်ဖုံးကွယ်ထားသည့်အံ့အားသင့်စရာအားလုံးတော့မရှိပါ။ အကယ်၍ အရင်မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုကကျောမှာလက်ဗွေဖတ်တဲ့သူရှိရင်၊ Xiaomi Mi 8 Explorer ကို၎င်းမျက်နှာပြင်တွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ - အနောက်ဘက်အပိုင်းကိုပိုမိုသန့်ရှင်းအောင် ထား၍ မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်သည်လက်ဗွေစကင်နာအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ဒီ model ကရပါလိမ့်မယ် 3D မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုမျက်နှာများသည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သမားရိုးကျပုံစံသည်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျစေရန်အတွက်အနည်းငယ်သောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
မူရင်း Xiaomi Mi 8:
၆ GB RAM + ၆၄ GB သိုလှောင်မှု - ၂၆၉၉ ယွမ် (၃၆၀ ယူရို)
Xiaomi က Mi 8 SE:
ဤမော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးတရုတ်၌သီးသန့်ဖြစ်လိမ့်မည်နေစဉ်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မည် လာမယ့်ဇွန်လ5ကနေရောင်းချမှုအပေါ် (မူရင်း Xiaomi Mi 8 model) နှင့်ဇွန် ၇ ရက်တွင် Xiaomi Mi7SE ဖြစ်သည်။ Explorer Edition ကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရက်စွဲမဖော်ပြထားသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » Xiaomi Mi 8: အင်္ဂါရပ်များ၊ ဗားရှင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
လာမည့်လတွင် Nest သည်စပိန်သို့မင်္ဂလာပါဟုကြေငြာခဲ့သည်